Iran: Reformista sady bilaogera mpikatroka voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, Italiano, polski, Español, English
Nosamborina tamin'ny Talata teo i Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitra reformista teo aloha sady mpanolo-tsaina an'i Mehdi Karoubi, kandidà reformista. Fanaon'i Abtahi ny nanavao ny bilaoginy isan'andro nandritra ny taona maro ary mizara ny heviny momba ny lohahevitra samihafa, anisan'izany ireo olana mahakasika an'i Iran.
Ity ny lahatsoratra farany navoakan'ny namany tao amin'ny bilaoginy amin'ny fiteny roa, Webneveshteha:
Voasambotra Atoa. Abtahi
Nosamborina androany (Talata) i Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitra teo aloha nandritra ny fitondran'Atoa Khatami sy ny mpanolo-tsainan'Atoa. Karroubi tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha vao tafavoaka izy, dia hanoratra eto amin'ny tranonkalany
Tamin'ny iray tamin'ireo lahatsorany farany, niantso ny fifidianana ho “fisolokiana miharihary” izy:
Nanadihady ny fisolokiana miharihary aho. Fisandohana goavana izany. Nomanina tamim-pahendrena ny fifidianana. Tetsy andaniny, nandrakitra ny fandrotsaham-bato be indrindra tamin'ny fifidianana izy raha nanamontsana ny azon'Atoa Khatami, ny tsara indrindra teo aloha izay nahazo vato marobe tamin'ny fotoam-piasany faharoa tamin'ny fifidianana azy ho filoham-pirenena ary tokony hahazo vato mihoatra noho izany Atoa Ahmadi Nejad. Ary te-hanimba an'Atoa. Mosavi sy ireo mpiara-dia aminy ihany koa izy ireo. Ampahany goavana hafa amin'ny zava-misy ny tantara momba ireo vatom-pifidianana 300.000 an'Atoa. Karobi. Na dia nahazo vato marobe tsy nihetsika aza Atoa. Karobi, noraisin'izy ireo ny vato 300.000 ho azy mba hanakanana ny hafa hilaza teny filamatra demaokratika tahaka izany. Mandritra izany, farafaraharatsiny nampiseho vato mitovy ho an'i Atoa. Mosavi sy Ahmadi Nejad ny vaovaon'ny tanàn-dehibe hafa.
Voasambotra ihany koa i Somayeh Tohidloo, bilaogera vehivavy reformista. Satria mitombo ny fihetsiketsehana manohitra ny fifidianana filoham-pirenena Iraniana, manohy misambotra ireo mpikatroka ara-politika ny manampahefana Iraniana. Vao haingana izy sy bilaogera maromaro no nikarakara tafatafa momba ny aterineto niarahana tamin'ny filoha teo aloha Mohammad Khatami.
Toa tsy azo nidirana intsony ny bilaoginy.
Mojtaba Saminejad, bilaogera monina ao Iran sady mpikatroka ny zon'olombelona, mampahafantatra antsika momba ireo bilaogera maro hafa voasambotra.
Nilaza i Saminejad fa samy nogadraina avokoa i Shiva Nazar Ahari: bilaogera vehivavy sady mpikatroka ny zon'olombelona; Mehesa Amarabadi: bilaogera vehivavy sady mpanao gazety; Karim Argandehpour: bilaogera sady mpanao gazety malaza ary i Amad Baharvar.
Tsy misy ny vaovao momba ny fiampangana ireo bilaogera ireo hatramin'izao.